ခရမ်းပြာမိန်းကလေး ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ - APANNPYAY
Home / ထူးဆန်းထွေလာ / ခရမ်းပြာမိန်းကလေး ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ
ခရမ်းပြာမိန်းကလေး ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ
Apann Pyay 3:29 PM ထူးဆန်းထွေလာ Edit
(၀) ပိုက်ဆံရလို့ အပြာကားရိုက်တယ် ဒါပါပဲ။
(၁) ယောက်ျားတစ်ယောက်အဖို့ ပညာမတတ်ရင် ပိုက်ဆံမရှိရင် လုပ်စားဖို့ အားကောင်မောင်းသန်ပုခုံးနဲ့ ကြွက်သားဖုထစ် လက်နှစ်ဖက်ရှိသေးတယ် မိန်းမတစ်ယောက်အဖို့တော့ ပညာမတတ်ရင် ငွေမရှိရင် သဘာဝကပေးတဲ့ ဟောဒိပေါင်ကြားကလယ်ကွက်ပဲ ရှိတော့တယ်။
(၂) ဇာတ်နာအောင် မျက်ရည်မချူတော့ပါဘူး ပညာမတတ် ပိုက်ဆံမရှိ အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းဘူး ဒါပါပဲ. . . ပထမတော့ ကေတီဗီ ဒုတိယမာဆတ် နောက်တော့လည်း ဒီလိုင်းရောက်လာတာပါပဲ ရှက်လဲရှက် မရှက်လည်းမရှက်တော့ပါဘူး ရှင်းရှင်းပြောရင် ဖာသည်ပေါ့။ သူများနိုင်ငံမှာတော့ ဖာသည်လူတန်းစားအတွက် ဥပဒေရှိတယ် တရားမျှတမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးရှိတယ် ဒီနိူင်ငံမှာတော့ အားလုံးရဲ့တံထွေးခွက်ပဲရှိတယ်
(၃) ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ အရင်လည်း အထဲဝင်ဖူးတယ် ပြေးရင်းလွှားရင်း မြောင်းထဲလိမ့်ကျဖူးတယ် လိုင်းကြေးရှိပေမယ့် စီမံချက်ဆိုပြေးရတာပဲ တခါကဆို အသွင်ယူဖမ်းတဲ့ကြွက်နဲ့ ရထားလမ်းဘေး အိပ်ခဲ့ရသေးတယ်။ ယောက်ျားတွေက သူတို့စိတ်ထန်ရင် သမီးအရင်းတောင် ဖြစ်တာရှိတယ် အသက်ပြည့်တာမပြည့်တာ မစဉ်းစားတော့ဘူးလေ ခရမ်းပြာတို့ရှိလို့သာ ဒီဆန္ဒတွေဖြေဖျောက်နိုင်တာ မဟုတ်ရင် ကမ္ဘာပျက်တာကြာပေါ့။
(၄) မရှိမဖြစ် ခရမ်းပြာပါ ဖာသည်ဆိုတာ ဟိုးပဝေသဏီကလည်းရှိတယ် ယခုလည်းရှိတယ် နောင်လည်းရှိနေမယ် ဖာသည်မို့ ဖာသည်အခွင့်အရေးလိုချင်တယ် ထိုင်းက ပက်ပုန်းလို စင်ကာပူကဂေလန်းလို နေရာအတိအကျ ရှိစေချင်တယ် တရားဝင်အခွန်ဆောင်ချင်တယ် မီဒီယာမှာ ကြော်ညာချင်တယ် လွှတ်တော်မှာ ဥပဒေရေးဆွဲပြီး ပြည့်တန်ဆာဥပဒေရယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းစေချင်တယ်။ မဟုတ်ရင် အနိူင်ကျင့်ခံရတာ များတယ်လေ ခေါင်း(ဂေါင်း)က ခေါင်းပုံဖြတ်တာရှိတယ် တစ်ယောက်ဆိုပြီး ငါးယောက်ဖြစ်ဖူးတယ် တစ်ရာပေးပြီး နှစ်ရာဖိုးခံရတာရှိတယ် အကြွေးဆုံးတာ ရှိဖူးတယ် ခရမ်းပြာတို့က အမှုဖွင့်လို့မရဘူးလေ လမ်းပေါ်တက် ဆန္ဒပြလို့မရဘူးလေ ခရမ်းပြာမှာ အိပ်မက်တစ်ခုရှိတယ် တစ်နေ့မှာ ဥပဒေဘောင်အတွင်းနေနိူင်ရမယ်ပေါ့။
(၇) ပညာမဲ့တိုင်း ငွေမရှိတိုင်း ဒီအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး လိုအပ်လို့ရှိရတဲ့ လူတန်းစားတစ်ရပ်ဆိုတာ အားလုံးကို နားလည်စေချင်တာ အတိတ်ကံလည်း ရှိမယ်ထင်တယ် ငွေရလွယ်တာလည်း ကြိုက်တယ် ရာဂစိတ်လည်း ရှိလို့ဖြစ်တယ်။ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ချင်စိတ်တော့ မိန်းမတိုင်း ရှိလိမ့်မယ် ဘဝကမှောင်ပြီဆို မမျှော်လင့်တဲ့ချောက်ကမ်းပါးတွေ ပြည့်နှက်နေတတ်တယ် လမ်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်ဖို့ မဖြစ်နိူင်သေးတဲ့အခါ ဘဝကို အံကြိတ်ဖြတ်သန်းရင်း ဒုတိယအကြိမ် သံတိုင်ကြားရောက်ရပြန်တာပေါ့လေ သမီးတစ်ယောက်ကိုတော့ အဖိုးအဖွားဆီထားခဲ့ရတယ် ပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တယ်လေ။
(၈) ဘဝကို ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ တရားမျှတစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ခရမ်းပြာပါ ငါးပါးသီလ မြဲခဲ့တယ်။ ပြည့်တန်ဆာအမှုနဲ့ အခုလို သံတိုင်ကြားရောက်တဲ့အခါ နားရတာပေါ့လေ ဒီအချိန်မှာ အတောင့်တဆုံးက ခရမ်းပြာလူတန်းစားရဲ့ခံစားချက်ကို သမ္မတကြီးဦးထင်ကျော် သိစေချင်တယ် နိူင်ငံတကာမှာလို ဥပဒေအကာအကွယ်ပေးစေချင်တယ် အားလည်းနာ အားလည်းကိုးပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်တုန်းက ခရမ်းပြာလည်းပါတယ်လေ ဆိုတော့လည်း . . . ပြည့်တန်ဆာအမှုနဲ့ သံတိုင်ကြားရောက်ရရှာသူ ခရမ်းပြာလည်း ပြောပြီလေ။